Shuruudaha iyo Qeexitaanka Daaweynta Proton - Proton Kalifoorniya
Erey bixinta Qaamuusyada Proton Therapy
Nidaamka Gawaarida doomaha - Nidaamka safarka dogobku waa silsilado elektromagnet ah oo haga dogobka. Bootaannada ka soo baxa cyclotron waxaa loo qaadaa qol kasta oo lagu daweynayo iyadoo la isticmaalayo xariiqda faakiyuumka.
Xannibayaasha Benign - Burooyinka aan caadiga ahayn ma aha kansar. Badanaa waa laga saari karaa, iyo, xaaladaha intooda badan, dib uma soo noqdaan. Unugyada burooyinka aan fiicnayn uguma faafaan qaybaha kale ee jirka.
Buruq Bragg - Barta ay borotoonada (iyo walxaha kale ee culus ee culus) ku kaydiyaan inta badan tamartooda. Marka borotoonada ay ku dhex safraan maaddada, waxay lumiyaan tamarta si tartiib tartiib ahna way u gaabisaa. Wax yar uun ka hor intaanay nasan, waxay dhigaan tamartooda ugu sarreysa.
CT Scan - Sawir-qaadista kombiyuutarka, oo sidoo kale loo yaqaan CT ama CAT scan, waa hab aan xanuun lahayn, oo aan faafin oo lagu arko gudaha jirka iyadoo la adeegsanayo sawir raajo. Inta lagu jiro baaritaanka CT, sawirro badan ayaa laga qaadayaa xaglo kala duwan. Kumbuyuutar ayaa isku daraya sawirrada si loo abuuro sawirro iskudhaf ah oo dijitaal ah, ama jeexan, nudaha jilicsan, xubnaha, xididdada dhiigga iyo lafaha. Xaleefyada badanaa waa la isku dari karaa si loo abuuro sawirro 3-D ah.
Chemotherapy - Daaweynta kiimikada ee kansarka waxay ku lug leedahay isticmaalka daawooyinka (oo loo qaato afka ama xididka) si loo weeraro unugyada kansarka, si toos ah ama si dadban, iyadoo ujeedadu tahay in la dilo ama la yareeyo koritaankooda.
Cyclotron - Cylotlotron wuxuu abuuraa borotokoolka isagoo adeegsanaya haydarojiin iyo oksijiin si uu u sameeyo il biyo ah. Proton-ka waa la soo saaraa, waa la dedejiyaa qiyaastii 100,000 mayl ilbiriqsi, ka dibna waxaa loo diraa nidaamka gaadiidka dogobka. Cylotron wuxuu culeyskiisu yahay qiyaastii 95 tan.
Dhaqtarka qurxinta - Takhaatiirta maqaarka waxay leeyihiin tababar gaar ah oo lagu cabbiro soo-gaadhista shucaaca iyo qorista qiyaasaha shucaaca ku habboon. Dhakhaatiirta jimicsiga iyo takhasusleyaasha dhakhaatiirta ayaa iskaashi la leh dhakhtarkaaga si loo qorsheeyo qorshe daaweyn. Waxay sidoo kale kormeeraan mashiinnada daaweynta shucaaca si ay ugu shaqeeyaan saxnaantooda.
Gamma Knife - Qalitaanka shucaaca Gamma Knife waa nooc shucaac ah oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo burooyinka halista ah iyo kuwa xun. Waxaa loo muujiyey inay faa'iido u leedahay daaweynta xaaladaha qaarkood ee aan kansarka lahayn, oo ay ku jiraan cilladaha shaqeynaya sida cillad arteriovenous (AVMs) iyo trigeminal neuralgia.
Gantry - Saddex ka mid ah qolalka lagu daweeyo Xarunta Daaweynta Kansarka ee Protoorniya ee California waxay ku qalabaysan yihiin gantry, taas oo ku wareegeysa bukaanka 360 digrii si loogu oggolaado in laga daweeyo dhinac kasta. Gaandi kastaa waa saddex dabaq oo dherer ah oo miisaankeedu yahay 283 tan.
Qalabka Kahortagga - Qalab loo isticmaalo in si sax ah oo raaxo leh loo dhigo bukaanka inta lagu jiro daweynta si dejinta bukaanku u xasilloon tahay.
Istiraatijiyeynta Raajka (Intestity-Modulated Therapy Therapy) (IMRT) - IMRT waa nooc horumarsan oo 3-D ah shucaac ku daaweyn oo u oggolaanaya kooxda caafimaadku inay cayimayaan xaddiga shucaaca ee burooyinka halka ay xadidayaan qiyaasta unugyada ku xeeran. IMRT waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo qanjirka 'prostate', madaxa iyo qoorta, iyo burooyinka kale ee u dhow xubnaha muhiimka ah iyo unugyada kansarka oo aan ka xor ahayn.
Bambooyin Khayaali ah - Burooyinka halista ah waa kansar waxayna ka kooban yihiin unugyo ka baxa koontaroolka. Unugyada burooyinkaan waxay weerari karaan unugyada u dhow waxayna ku faafi karaan qaybaha kale ee jirka.
Daawada Oncologist - Dhakhtar ku takhasusay ogaanshaha iyo daaweynta kansarka. Ka dib marka la ogaado cudurka kansarka, waa doorka dhakhtarka kansarka inuu sharrax ka bixiyo cudurka kansarka iyo macnaha heerka cudurka bukaanka; ka wada hadlaan fursadaha daaweynta kala duwan; kugula talin habka ugu fiican ee daaweynta; gaarsiiyaan daryeel wanaagsan; iyo wanaajinta tayada nolosha labadaba iyada oo loo marayo daaweynta daaweynta iyo daaweynta xanuunka ee xanuunka iyo maaraynta astaamaha. Dhakhtarka kansarka caafimaadku wuxuu kaloo qoraa oo bixiyaa daaweynta nidaamka iyo daaweynta kiimikada markii la muujiyo.
metastasis - Faafitaanka kansarka ama cudur ka yimaada xubin ama qayb jirka ka mid ah una gudubta mid kale oo aan si toos ah ugu xirnayn. Mararka qaar unugyada ayaa ka guura goobta asalka ah (aasaasiga ah) waxayna ku faafaan xubnaha iyo lafaha kale halkaasoo ay ku sii wadi karaan inay ku koraan oo ay ku sameystaan ​​buro kale goobtaas. Tan waxaa loo yaqaanaa metastasis ama kansarka labaad.
MRI - Sawir-qaadista 'Magnetic Resonance imaging', oo sidoo kale loo yaqaan 'MRI,' waa nidaam sawir-xanuun aan xanuun lahayn oo loo adeegsado in lagu caawiyo baaritaanka xaalado kala duwan. Mashiinka 'MRI scanner' wuxuu adeegsadaa birlab xoog leh, mowjadaha raadiyaha iyo teknolojiyadda kumbuyuutarka si uu u soo saaro sawirrada xubnaha, unugyada jilicsan, lafaha iyo inta badan qaababka kale ee jirka dhammaan dhinacyada, iyadoo aan la isticmaalin shucaaca ionizing.
Kala-goys aan toos ahayn - Habka dhaqameed ee loogu talagalay bixinta proton therapy kaas oo qaabeynta dusha sare si ay ula jaan qaado burada ay ka dhacdo meel ka baxsan cirbadda daaweynta.
Sawirka qalin qoriga - Tignoolojiyaddii ugu dambeysay ee teknolojiyadda daaweynta, qalin baarista qalinku waxay u oggolaaneysaa qaddarka saxda ah ee daaweynta proton in loo geeyo buro. Teknolojiyada waxay xaddideysaa soo-gaadhista shucaaca nudaha ku xeeran. Qoryaha qalinka waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo burooyinka adag iyo kuwa adag ee kansarka iyo burooyinka aan caadiga ahayn ee bukaanka qaangaarka ah iyo carruurta.
Baaritaanka PET - Positron Emission Tomography, oo sidoo kale loo yaqaan 'PET scan', waa farsamo sawireed oo lagu baaro shaqada dheef-shiid kiimikaadka. Waxaa loo isticmaali karaa baaritaanka iyo la socoshada horumarka cudur ama xaalad. Inta lagu jiro baaritaanka PET, walax shucaac ah oo loo yaqaan raad-raac ayaa la siiyaa xididka. Noocyada unugyada qaarkood - sida unugyada kansarka - waxay dheef-shiid kiimikaadkan ka dhaqso badan unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran. Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad sawir sare leh, sawirka PET ayaa muujinaya aagagga dheef-shiid kiimikaad aan caadi ahayn si looga caawiyo tilmaamidda halka cudurku ka soo jeedo jirka iyo sida uu u socdo.
Sawir - Qaybta yar ee iftiinka ama shucaaca elektromagnetic. Raajooyinka iyo shucaaca gamma waa shucaac foton ah.
Antigen-Specific Antigen (PSA) - Antigen-gaar ah oo loo yaqaan 'antigen' (PSA) waa borotiin ay soo saaraan unugyada qanjirka 'prostate'. Baaritaanka PSA waxaa loo sameeyaa si looga caawiyo baaritaanka iyo la socoshada kansarka qanjidhka ragga.
Shucaaca Proton / Proton - Borotoonku waa shey si togan loo soo eedeeyey oo laga helay bu'da atọka. Borotoonada loo isticmaalo daaweynta proton waxaa laga soo qaatay in laga jaro aaladda hydrogen atom elektaronkeeda. Shucaaca Proton waa nooc ka mid ah daaweynta shucaaca-beam-ka ee bannaanka, oo lagu bixiyo iyadoo la abuurayo dogob ka soo gala jidhka jirka. Marka borotoonada ay la falgalaan koronto-wadayaasha atamka unugyada kansarka, waxay soo bandhigaan tamar dhaawacaysa DNA-da unugga kansarka. Tani waxay burburisaa shaqooyinka gaarka ah ee unugyada, oo ay ku jiraan awoodda wax loo qaybiyo ama loo badiyo. Awoodda unugga kansarka ee hagaajinta dhaawacyada noocaas ah ayaa guud ahaan ka liita kan unugyada ku jira unugyada caadiga ah. Natiijo ahaan, unugyada kansarku way dhintaan, sidoo kale burooyinka way dhintaan.
Proton Therapy - Daaweynta loo yaqaan 'Proton therapy' waa nooc ka mid ah daaweynta shucaaca ee loo isticmaalo proton (qaybaha subatomic) halkii laga isticmaali lahaa raajada lagu daaweeyo xaaladaha kansarka iyo kuwa aan kansarka lahayn. Waxay bartilmaameedsan kartaa burooyinka si sax ah u sarreeya, hoos u dhigista dhaawaca unugyada dhow iyo xubnaha caafimaadka leh iyo yaraynta halista kansarka labaad ee ay keento shucaaca shucaaca.
Shaybaarka Shucaaca - Dhakhtar loo tababaray inuu kansarka ku daaweeyo shucaac wuxuuna soo jeedin doonaa talooyin ku saabsan daaweyntaada. Dhakhaatiirta kansarka shucaaca waxay sidoo kale ku daaweeyaan qaar ka mid ah cudurrada aan fiicnayn shucaaca.
Daaweeynta Shucaaca - Daaweeyeyaasha shucaaca ayaa loo tababbaray loona sharciyeeyay inay soo gudbiyaan daaweynta shucaaca, iyagoo ku maamulaya shucaaca dhakhtarka qoro iyo kormeer. Waxay sidoo kale abaabulaan jadwalka maalinlaha ah ee bukaanka, kormeeraan bukaan socodka inta lagu jiro daaweyn kasta oo shucaac ah, waxay hayaan diiwaanada maalinlaha ah waxayna sameeyaan hubin tayo leh mashiinada shucaaca si loo hubiyo inay si sax ah u shaqeynayaan.